FX Amanani BlackBerry 10. Easy Currency Converter — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izihloko mayelana BlackBerry → Izinhlelo ze-BlackBerry →
FX Amanani BlackBerry 10. Easy Currency Converter
Uma kuziwa emalini converters ukuze BlackBerry 10, sinazo, Yiqiniso, akukho zigameko zokushoda lokuzikhethela. Enye yezinto izicelo ezithakazelisayo kungaba ngokuthi FX Yempahla S4BB. A ukumangala emnandi ngokuba niyakuba ukuthi isicelo hhayi kuphela elakhelwe for BlackBerry, kodwa futhi basakaza mahhala. Le nguqulo ikhokhwe kuyokusiza ukuba uthole ngokuphelele balahle izikhangiso, kodwa, ngokubona abanikazi BlackBerry, ukulandisa khulula futhi isebenza kahle.
Ngokuyinhloko, ukuthi udonsa kulesi sicelo — interface ukhululekile futhi zibukeke okuthokozisayo. Ukungeza ohlwini kumave lwemali Kulula kakhulu, ne okukodwa on the icon "+". Bese ungakhetha izwe elifanele ukusuka uhlu omkhulu. Uma wenze ukukhetha, ngokuchofoza izwe olufunayo insimu enisanda kudingeka ukungena lemali ukuguqula. Uma senza kanjalo imiphumela ziyobonakala wonke amazwe lapho uzothola.
Uma uhlela emazweni akhethiwe ukugcina press eside igama yezwe ufuna ukususa kusuka ohlwini. ukubukeka Easy futhi kumnandi ukwenza lolu hlelo lokusebenza mahhala omunye yimpumelelo kakhulu esigabeni yayo. Yiqiniso, lena akuyona isimiso abasebenzisi iningi smartphone uzovulelwa nsuku zonke, kodwa kosomabhizinisi ukwenza ibhizinisi ngezinga international, ngisho izakhamuzi ezivamile abajikelezayo eholidini phesheya, lokhu kuyinto ithuluzi Ukugunda kakhulu ukuthi kuyasiza ukuba kudivayisi yakho.
FX rates etholakalayo wonke Smartphones BlackBerry 10. Ezinye izici zayo zihlanganisa:
khulula multikonvertatsiya rates ngesikhathi real
support for 139 zezimali
isilandelwa esikukhompiyutha (akukho internet for ukusetshenziswa izinga lokushintshisana uxhumano last)
ukwabelana ukuguqulwa nge BBM, Twitter, Facebook, LinkedIn, imeyili, Text, WhatsApp, NFC
ukubekela besebenzisa Drag'n'Drop
exchange rate update ngesicelo
Landa uhlelo lokusebenza kungaba Ezweni BlackBerry .